के नेकपा फुटपछि चीनले नेपालकाे नीतिमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दैछ ? - बडिमालिका खबर
के नेकपा फुटपछि चीनले नेपालकाे नीतिमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दैछ ?
काठमाडौं — केही महीना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच बारम्बार भेटघाट हुन्थ्यो । राजदूत होउ शितलनिवास पुगेको खबर पनि बाक्लै आउँथ्यो ।
नेपाललाई छिटो सहयोग गर्न सक्ने मुलुक भारतपछि चीन नै हो, तर समयमा उच्च तहमा आग्रह नै गरिएन । लामो समयसम्म नेपाल बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको मात्र भर पर्‍यो । पछि जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन वार्ता गरिन् चीनले थप १० लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्रीको तहबाट खासै चीनसँग कुनै सहयोग माग्ने काम भएन । सहयोग मात्र होइन, चीनले आठ लाख खोप खरिद गरेपछि खोप खरिदको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेन । चीनको केन्द्र सरकारका साथै सिचुवान, तिब्बत लगायत प्रान्तहरुले आफ्नै हिसाबले स्वास्थ्य सामाग्रीहरु नेपाल पठाउन भने रोकेनन् ।